नेपालमै टिकटक बाट महिनाको २ लाखभन्दा बढी कमाउने युवा, यसरि घरमै बसी बसी कमाउन सकिने रहेछ ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / नेपालमै टिकटक बाट महिनाको २ लाखभन्दा बढी कमाउने युवा, यसरि घरमै बसी बसी कमाउन सकिने रहेछ !
नेपालमै टिकटक बाट महिनाको २ लाखभन्दा बढी कमाउने युवा, यसरि घरमै बसी बसी कमाउन सकिने रहेछ !
admin July 15, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 59 Views
समिक्षासँगको सम्बन्धबारे के भन्छन् पल ?
काठमाडौं । तपाइले केहि समय अगाडी देखि बाट सुन्नु भएको कुरा हो कि टिकटकमा पैसा कमाउन सकिन्छ ? तर कसरि भन्ने कुरा प्रायलाइ कमै थाहा छ । आज हामीले यसै बाट नेपालमा बसेर लाखौ कमाएका युवाको बारेमा भिडियो बनाएका छौ ।
यिनको नाम हो रिदम क्षेत्री जसले महिनामा टिकटकमै लाइभ बसेर २ लाख भन्दा बढी कमाएका छन् र भब्य पार्टी दिएका छन् | संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् ।
कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् ।संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फस्छ, फस्छ ।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका नागरिकको सोचाई हुन्छ,- आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँ, आफ्नो एउटा सानो घर होस् र परेको बेला खर्च पनि गर्ने पैसा होस् । मोनिटाइज भएका अकाउन्टमा राखिएको कन्टेन्टमा विज्ञापन आउने र त्यसवापत सम्बन्धित टिकटकका अकाउन्ट सञ्चालकले रकम पाउने छन् । हेर्नुहोस –
Previous लामो दुरीको सवारी संचालन सम्बन्धमा आयो नसोचेको निर्णय
Next ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानैलाग्दा जब माधव नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गरे, ओलीले भने ‘तिम्रो शुभकामना चाहिएन’
काठमाडौं – नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी केही समययता चर्चामा छन् । उनीहरूबीचको …